Kristin ရဲ့အနာဂတ္တိကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်နှ&# | Apg29
နာမည်ကျော် Kristinebergs အနာဂတ္တိကအရမ်းအချိန်မီဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့မကြာခင်ခရစ်တော်၏ပုံရိပ်တစ်ခုတောင်ထိပ်ပေါ်မှာမိမိကိုမိမိကိုထင်ရှားစွာပြတွေ့မြင်ကြလိမ့်မည်နည်း
Kristin ရဲ့အနာဂတ္တိမနှစ်က 1800 ၏ Wilhelmina အတွက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်ပရောဖက်ပြုသဖြင့်ခဲ့သည်။ ဒါဟာရေးမှတ်ထို့နောက်ပါးစပ်ဇာတ်လမ်းပြောပြစဉ်အလာအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာထားရှိမည်ခဲ့သည်။ မူရင်းUmeåအတွက်ကောင်တီပြတိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အဘယ်အရာကိုဒီအနာဂတ္တိစိတ်ဝင်စားဖို့စေသည်နိုဝင်ဘာလ 1946 29 တွင် 1946 ခုနှစ် Kristineberg အတွက်သတ္တုတွင်းများတွင်ဖြစ်ပျက်ဘာသတ္တုတွင်းအတွင်းပိုင်းအထိမှုတ်။ မြေမှုန့်အခြေချနေထိုင်ခဲ့သည့်အခါတောင်တော်မြို့ရိုးပေါ်မှာယေရှု၏တစ်ဦးငွေရောင် image ကိုလှည့်။
ကြောကျနံရံပေါ်မှာမှောင် korit-quartzite ကဝိုင်း illuminated သည့်အခါ glistening နှင့်တောက်ပ, ငွေထွန်းလင်း sericite quartzite အတွက် MICA ဓာတ်သတ္တုအနည်းငယ်နှစ်ခုကျော်မီတာမြင့်သောခရစ်တော်အားဖြင့် image ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။
သူ၏ခေါင်းကို၏ဦးရစ်သရဖူရွှေအတောက်ပကျောက်ခဲတို့ကိုဖန်ဆင်းသည်။ ဦးခေါင်းထိပ်မှသည်ခြေဘဝါးမှယရှေုထံမှစီးဆင်းအသွေးစီး၏ဆင်တူအဝတ်ပတ်ပတ်လည်တစ်ဦးတီးဝိုင်းကျရောက်ပါတယ်။ ငွေရောင်ပေမယ့်အချို့ဘေးထွက်အလင်းရောင်စဉ်အတွင်းခရမ်းရောင်-အနီရောင်နှင့်အတူ shimmering အဆိုပါခြေကျင်း-အရှည်အိမ်မှ။
ဒါဟာယရှေုကမိမိလက်မောင်းများတွင်သယ်ဆောင်, သိုးသငယ်၏အခကျြအောပိုင်းခြားလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ တဦးတည်းလက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများနှင့်လမ်းညွှန်မှုအဖြစ်တိုးချဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှုမှုတ်ဆက်လက်သော်လည်း, ယရှေုသညျရုပျပုံကိုဖကျြဆီးခဲ့သည့်အခါ။ အဆိုပါလုပ်သားများငြင်းဆန်ခဲ့သည်။
နောက်ပိုင်းတွင်စစ်တမ်းများကမှုတ်ဖို့တစ်ခုလုံးကိုသတ္တုတွင်းဆက်လက်လျှင်ပုံစံပေါ်တွင်သညျယရှေုရုပ်ပုံအဖြစ်, သတ္တုတွင်းများ၏ထောက်ပံ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထို့နောက်ရော့ခ်မြို့ရိုးကိုပြိုကျပြီ။ ပြသကြ
သို့သော်တောင်ကိုအလယ်၌ထငျရှားသောဤသညျယရှေုပုံရိပ်, ယ့်ထူးဆန်းတဲ့နှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရုပ်ပုံမဟုတ်ပါဘူး။ အမျိုးပျက်သောအရာ 1800 ကနေအဟောင်း Kristinebergsgatan အနာဂတ္တိဤဖြစ်ရပ်၏အဖြစ် updated ခဲ့သည်။
ဒီထူးခြားတဲ့ကိန်းဂဏန်းသတ္တုတွင်း၌ဗျာဒိတ်မတိုင်မီဆယ်စုနှစ်များအတွက်ကြပါစေယင်းအတွက်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သောဤအနာဂတ္တိ, Wilhelmina lappmark ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးတို့ကဝတ်ဆင်ခဲ့သညျ။ အနာဂတ္တိနောက်ဆုံးမှာချရေးသားUmeåအတွက်ကောင်တီပြတိုက်မှာချုပ်နှောင်ထားထဲတွင်နေရာခဲ့သည်။
ပို. ပင်ထူးခြားပြောင်မြောက်သင်ကိန်းဂဏန်းသည်ထင်ရှားရှေ့တော်၌ထိုမြို့ Kristinebergsgatan (= Krist တောင်တော်အတွင်းပိုင်း) ကိုအမည်ဖြင့်ရှိခဲ့ကြောင်းဆင်ခြင်သောအခါ, သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
အဆိုပါပုံရိပ်သတ္တုတွင်းထဲမှာခရစ်တော်၏ပုံရိပ်ကိုမြင်နေပြီးနောက်ဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်နှင့် Johan Olofsson အမည်ရှိစက် driller သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နှင့် teetotal ခဲ့သည်နှစ်ဦးစလုံးသူတစ်ဦးဓာတ်ပုံဆရာတို့ကမှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံများရိုက်ကူး။
အဆိုပါကောလာဟလ သွား. ရုပ်ပုံသတင်းစာ Norra Västerbottenထုတ်ဝေနှင့်လူ 120 မီတာအဆင့်အထိဆင်းဓါတ်လှေကားကိုယူမှမိုင်းကြပါတယ်, ပြီးတော့တစ်ဦးဒေါင်လိုက်သံလှေကားအပေါ် 13 မီတာအထိတက်ပြီး။ အတော်များများရှိပါတယ်ရရှိရန်လိုအပ်အကူအညီနဲ့, ဒါပေမယ့်လူတိုင်းကတန်ဖိုးရှိခဲ့စဉ်းစားမိတယ်။
အားလုံးဧည့်သည်များကိုးကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာခံစားချက်အချို့ကိုမျိုးကိုကြုံခဲ့ရသည်။ လူတို့အစီးဆက်လက်ဒီတော့အလုပ်ကိုပြု၏။ အဆိုပါပုံရိပ်သည်မိုက်သည်အခန်းထဲမှာကျောက်စရစ်နှင့်ပြည့်စုံလေ၏နှင့်လအနည်းငယ်အကြာတွင်မြင်နိုင်ရုပ်ပုံမဟုတ်ခဲ့ပေ။
ဒါပေမယ့်ကောလဟာလ သွား. သူတို့ကပုံရိပ်အခုတော့ရွာသားတွေလည်းယခုBjörkseleအသင်းတော်၌တစ်ဦး altarpiece အဖြစ်ရရှိနိုင်avmåladဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ထိုအခါဖြစ်ရပ်သည်သူ၏မိခင်နှင့်ဆက်စပ်သောခံခဲ့ရသည်တစ်ဦးအနာဂတ္တိအနုပညာရှင် Lisa ကို Johansson များ၏အရပ်ဒေသ၌အခြေတည်သောအတွက်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ သူမသည်သူမခရစျကိုယျတိုငျပြခရစ်တော်၏ပုံရိပ်ကိုမွကွေီး၏ဝမ်းမြို့၌သင်္ဂြိုဟ်လေ၏ရှိရာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရှိကွောငျးကိုသင့်ကြောင်းထင်ရှားခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါဇာတ်လမ်းကို 1968 ခုနှစ်တွင်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သည်နှင့် display ကိုအမှုနောက်ကွယ်မှစကျင်ကျောက်ပြားဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည် Kristineberg အတွက် op မှပေါ်တတ်၏။ ကအေဲနျဂြီမန်နေဂျာ Stig-GöranSjöströmသူတို့အသုံးဝင်သောဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရှိရာမိမိအနွေရာသီအိမ်မှာပန်းကန်စောင့်မတော်မူ၏။
တစ်နေ့မှာသူမသတ္တုတွင်း၌ထငျရှားသောတဦးတည်းနီးပါးတူညီခဲ့ကြောင်းခရစ်တော်၏ပုံရိပ်တစ်ခုကိုမွငျလြှငျ, တစ်ပန်းကန်ပေါ်နှင့်သူမ၏အံ့အားသင့်ဖို့သူ့ဇနီးလှည့်။ ခရစ်တော်သည်ဒုတိယအကြိမ်သည်ထင်ရှားခဲ့သည်။
ယနေ့အသင်းတော်၌တစ်စကျင်ကျောက်ပြား Kristineberg နှင့်မြေအောက်ဘုရားကျောင်းထဲမှာရှိကြီးမားသောဓာတ်ပုံပြပွဲပုံရိပ်ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ချိန်က "မြေအောက်" တွင်တဦးတည်းသတ္တုတူးဖော်ရေးစက်တွေ၏သေးငယ်တဲ့ပြပွဲတွေ့နိုင်ပါသည်။ ထိုအခါကဖီးအတွက်ကော်ဖီမှကုသကြသည်နှင့်သင်လက်ဝတ်ရတနာဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါဘုရားကျောင်းလည်းမင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုရေပန်းစားနေရာဖြစ်လာသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူအပေါငျးတို့ကရိုးရှင်းပြီးမင်္ဂလာဆောင်လက်စွပ်ကိုဆိုလိုသည်။
"ကမ္ဘာ့နောက်ဆုံးသောကာလ၌လူများစွာနောက်ဆုံးတရားစီရင်ရာအချိန်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းကြလိမ့်မည်ဘယ်သူကို၏မိစ္ဆာပရောဖက်ရှိရလိမ့်မည်။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သောဆွေးနွေးချက်စကားကိုနားထောငျလြှငျ, သာဘုရားသခငျသညျထိုနေ့ရက်တွေအကြောင်းသိတယ်အဘို့, သူတို့သည်အဘယ်သို့ပြောသည်ကိုယုံကြည်ကြပါဘူး။
ခရစ်ယာန်ဘာသာငြင်းပယ်ခြင်းနှင့်ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်ညီပျောက်ကွယ်သွား။ ပြည်သူ့အဘယ်သူမျှမဘုရားသခင်သည်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းထင်ပါလိမ့်မယ်။ အချို့လူများကလူများကိုသူတို့အံ့ဖွယ်အကြောင်းကိုဆောင်ခဲ့သောစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။
အနာဂတ်မှာလူတွေ, ဟုတ်တယ်, သူတို့ကမပေးတောင်မှဘုရားသခငျသညျထိုကဲ့သို့သောအံ့ဘွယ်သောအမှုပြုတော်မူပြီဟုယုံကြည်ကြသည်ဒါကြောင့်ကြီးမားတဲ့အကြီးအတီထွင်မှုစေမည်။ လူ့တီထွင်မှုသညျဘုရားသခငျကိုဖန်တီးကြောင်း, လူများအဖြစ်ဝတ်ဆင်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်လူအများစုစိတ်ဝိညာဉ်ကိုအားနည်းနေပါလိမ့်မယ်။
လူများတို့သည်နဂါးကဲ့သို့အရာဝတ္ထုအပေါ်မိုဃ်းကောင်းကင်၌သွားလာကြလိမ့်မည်။ မိုဃ်းကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးပေါ်မှာရှိသောနှင့်မြေကြီးအောက်မှာနဂါး-ကဲ့သို့ sizzling တ္ထုရှိပါလိမ့်မယ်။
နောက်တစ်နေ့ခြေလှမ်းများသည်သေခြင်းကျော်လွှားဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ မည်သူမျှထာဝရအသက်ကိုသေဆုံးပေမယ့်ရှိသည်ဖို့ရှိသင့်သည်။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုလူတွေကမြင်ရပါလိမ့်မည်, ဒါပေမဲ့သူတို့မရှိတော့သည်ပညာကိုမြင်နိုင်သောမျက်စိရှိသည်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမှမိမိတို့နည်းလမ်းတွေပြန်နေကောင်းကြပါဘူး။
ဒါပေမယ့်နော်ဒစ်ဒေသတွင်း၌အရပ်ရှည်ရှည်လူများ၏တစ်ပြည်နှင့်မြောက်ပိုင်းတိုင်း Landen များ၏လူမျိုးပြီးသားမြေကြီးပေါ်မှာမှထွက်သွားပြီအဆိုပါအခက်အခဲတွေရဲ့အရှည်ဆုံးအတွက်နှမြောရလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်အဘို့ကိုယ်တော်တိုင်သောတောင်ပေါ် shimmering မြောက်ပိုင်း Exposure များအနက်တပါးတည်းသောသားတော်ကိုများအတွက်သူ၏နေရာကိုရှင်းလင်းခဲ့သည်။ တောင်တော်နှင့်တိုင်းပြည်ရှည်လျားသခင်ဘုရား၏လက်တော်ဖြင့်လွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။ အဘယ်မှာရှိကျောက်, တိုင်းပြည်သေး, မရဖြစ်ကြပေမယ့်ကမ္ဘာကိုနောက်ဆုံးသောကာလထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်။
ထိုကာလမရောက်မှီသို့သော်လည်း Nordan Landen ရှိလူညျဘုရားသခငျ၏လမ်းပြမြေပုံထံမှ ထွက်. လည်။ သူတို့ကသူ့ကို၏ရက်ရက်ရောရောကြောင့်ရသေး, ဘုရား, မြောက်ကလူအပေါ်မသနားတျောမူပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့်ပင်ကိုလူများအပြစ်တရားသို့ယူရလိမ့်မည်။ ထိုအခါဘုရားသခငျကလူတပါးတည်းသောသားတော်ကိုပေးသောသူသည်ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ထားသည့် shimmering တောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့သည် နေ. , ထဲ၌နေသောနေကိုပြသပါလိမ့်မယ်။
ခရစ်တော်၏ပုံရိပ်ကိုမတိုင်မီအံ့သြအကြံပေးဖို့အချိန်မရှိဘူးလာပါတယ်။ သို့သော်မကြာမီသူတို့အရာအားလုံးကိုမေ့လျော့မည်အကြောင်း, အဓမ္မလူစုနိုင်တတ်၏။ သူတို့ဟာအဘယ်သူမျှမဘုရားပေမယ့်အသိပညာ၏ဘုရားရှိကွောငျးကြွေးကြော်ရကြမည်။
အဆိုပါ shimmering ရော့ခ်ထို့နောက် re-ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဘုရားသခငျ့ရှိသေးနထေိုငျသောလူအပေါ်အနားယူလက်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်သောကြောင့်, လူစုအကြောင်းကိုစကားပြောရလိမ့်မည်။
လူတိုင်းကမြင်တွေ့နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီအချိန်, ခရစျ၏ပုံရိပ်ကို, တောင်ပေါ်၏ထိပ်ကိုပြ။ တနည်းကား, လူအမြင်ကြီးအအံ့ဖွယ်အနေဖြင့်အံ့သြခြင်းရှိလော့။
ဘုရားသခငျသညျအစအဖြစ်ကြာမြင့်စွာရုပ်တုထွက်လှည့်, မိမိတို့နေရာသို့လူ့လက်ဖြင့်ဖိမိပြီးမပြုလုပ်အနာဂတ်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကနေမြောက်ပိုင်း Exposure လူတွေနှမြောဖို့အချိန်ဖြစ်လိမ့်မည်။
သို့သော်အဓမ္မတိုးပွားလာ။ လူသားရဲ့မယုံနိုင်စရာပိုကြီးနှင့်ပိုကြီးလာပြီ။ နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရ gudagestalten နှင့်အတူတောင်ကြီးတောင်ငယ်။ ဘုရားသခငျသညျ၎င်းငျး၏မြောက်ပိုင်း Exposure ကလူကနေလက်ကိုကာကွယ်အဖြစ်ကြာပါသည်။
လူတွေအရပ်ရှည်ရှည်ဒီတော့ဝေးသောအရပ်မှနှမြောခဲ့ကြောင်းအဆိုပါအခက်အခဲတွေ, သူတို့အပေါ်သို့ရောက်လိမ့်မည်။ ခုနစ်ဆနှင့်ဒုတိယကမ္ဘာ့နိုင်ငံများနှင့်လူမျိုးကိုညှဉ်းဆဲသောဘေးထက်ခုနစ်ကြိမ်ပိုပြီးဖြစ်၏။ "
1800 ကနေ Wilhelmina အတွက်မိန်းမအားအနာဂတ္တိအတွက်အချို့သောထူးခြားတဲ့အသေးစိတျကိုသတိပြုမိခဲ့ဘူးရှိပါသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေ့လာဖို့အထက်တွင်ပျော်ရွှင်အနာဂတ္တိ။ ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူမျှဝေချင်သောအနည်းငယ်သောအရာတို့ကိုသတိပြုမိသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိလိမ့်မည်ဆိုပါကဤသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သိကြ၏။ ဒါဟာအမေရိကန်အတွက် "ပရောဖကျသညျ 'နောကျဆုံးတရားစီရငျနဲ့ယေရှုကြွလာဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သည်ဤမျှကာလပတ်လုံးလွန်ခဲ့တဲ့မဟုတ်ခဲ့ပေ။ အတော်ကြာအနာဂတ္တိလည်းပြောပါတယ်ကြောင့် "သာဘုရားသခငျသညျထိုနေ့ရက်တွေအကြောင်းသိတယ်" ဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သွားပေမယ့်။
လူ့တီထွင်မှုသညျဘုရားသခငျကိုဖန်တီးကြောင်း, လူများအဖြစ်ဝတ်ဆင်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်လူအများစုစိတ်ဝိညာဉ်ကိုအားနည်းနေပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်မအနေဖြင့်လွန်ခဲ့သည့်ဒီအကြောင်းကိုဖတ်ပြီးသောအခါ, လူသားမြားသညျ clone အကြောင်းကြီးလျှင်ငါသိချင်ပေမယ့်အဖြစ်ကောင်းစွာကျားမပြင်ဆင်ချက်နှင့် ပတ်သက်. ဖြစ်နိုင်သည်။ လူတို့သညျမှအမျိုးသမီးများနှင့်မိန်းမတို့အားယောက်ျား၏အထီးဖက်ရှင်။ အနာဂတ္တိယခုကြှနျုပျတို့တှငျနထေိုငျသောအခြိနျနှငျ့ဿုံကိုက်ညီ။
1800 ခုနှစ်တွင် Wilhelmina အတွက်လေယာဉ်ပရောဖက်ပြုနိုင်ဖြစ်ခြင်းဘုရားသခင်ထံမှပေမယ့်ဘာမျှမပါ!
နောက်တဖန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်များအတွက်ပစ်မှတ်ပေါ်မှာ Right ။
ဒါပေမဲ့အဲဒီမှာထာဝရအသက်ကိုရှိသည်ဖို့တစ်ဦးတည်းသာလမ်းဖွင့်နှင့်သင်သည်သင်၏အပြစ်များကိုနောင်တရနှင့်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ သညျယရှေုကိုလက်မခံ ခြင်းနှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ကိုယ်တော်ဝန်ခံ!
ခရစ်တော်၏ပုံရိပ်ကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူ့အပြစ်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းထဲကနေနှမြောခံတော်မူပြီးမှရှိနေသော်လည်းကြီးထွားလာ၏အဆုံးအကြိမ်ကဖြစ်သောနိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Read နှင့်ငါ၏ရဲရင့်သုံးသပ်:
ဒါပေမယ့်နော်ဒစ်ဒေသတွင်း၌အရပ်ရှည်ရှည်လူများ၏တစ်ပြည်နှင့်မြောက်ပိုင်းတိုင်း Landen များ၏လူမျိုးပြီးသားမြေကြီးပေါ်မှာမှထွက်သွားပြီအဆိုပါအခက်အခဲတွေရဲ့အရှည်ဆုံးအတွက်နှမြောရလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်အဘို့ကိုယ်တော်တိုင်တပါးတည်းသောသားတော်ကိုများအတွက်သူ၏နေရာကိုရှင်းလင်းထားပါတယ် သောတောင်ပေါ် shimmering မြောက်ပိုင်း Exposure ၏တဦးတည်း၏ ။ တောင်တော်နှင့်တိုင်းပြည်ရှည်လျားသခင်ဘုရား၏လက်တော်ဖြင့်လွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။ အဘယ်မှာရှိကျောက်, တိုင်းပြည်သေး, မရဖြစ်ကြပေမယ့်ကမ္ဘာကိုနောက်ဆုံးသောကာလထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်။
ထိုကာလမရောက်မှီသို့သော်လည်း Nordan Landen ရှိလူ ညျဘုရားသခငျ၏လမ်းပြမြေပုံထံမှ ထွက်. လည် ။ သို့သျောလညျးဘုရားသခငျသညျလိမျ့မညျ သူတို့ကိုယ်နှိုက်အတွက်ရက်ရက်ရောရောကြောင့်, မြောက်ကလူအပေါ်သနားတျောမူပါ ။
သို့သော်လူဖြစ်ရမည်အကြောင်းပင် အရှက်ကွဲယူ ။ ထိုအခါ ဘုရားသခငျသညျလိမျ့မညျ ကိုပြသ သောလူတပါးတည်းသောသားတော်ကိုပေးသောသူသည်ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ထားသည့် shimmering တောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့သည် နေ. , ထဲ၌နေသောနေ။
ခရစ်တော်၏ပုံရိပ်ကိုမတိုင်မီအံ့သြအကြံပေးဖို့အချိန်မရှိဘူးလာပါတယ်။ သို့သော်မကြာမီသူတို့လိမ့်မယ် မေ့လျော့ အရာအားလုံးနှင့် အဓမ္မနိုင် လူစု။ သူတို့ကဦးမည် မျှဘုရားပေမယ့်အသိပညာ၏ဘုရားရှိကွောငျး, အော်ဟစ် ။
ဒါဟာယနေ့ကျွန်ုပ်တို့မှာနေထိုင်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့လူလုံးဝချွတ်, ဘေးဖယ်အဓမ္မနှင့်အပြစ်ထွက်ပြေးသွားတဲ့လှည့်ခဲ့ကြပြီးမကြာခဏငါတို့သည်နောက်ဘုရားပေမယ့်အသိပညာ၏ဘုရားသခင် "ရှိပါတယ် '' ကြား ။
ဤအချိန်, အ ခရစျ၏ပုံရိပ်ကိုတောင်ပေါ်၏ထိပ်ကိုပြသ လူတိုင်းကမြင်တွေ့နိုင်တယ်ဒါကြောင့်။ တနည်းကား, လူအမြင်ကြီးအအံ့ဖွယ်အနေဖြင့်အံ့သြခြင်းရှိလော့။
နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ကာလ၌, ခရစ်တော်၏ရုပ်ပုံကိုထပ်ပေါ်လာပါသည်။ "လူတိုင်းကမြင်တွေ့နိုင်တယ်။ " ဒါကြောင့်ယခုမူကားကတောင်ပေါ်မှာ, ဒါပေမယ့်တောင်ထိပ်ပေါ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ
အဘယ်ကြောင့်ခရစ်တော်၏ရုပ်ပုံကိုတဖန်ဖြစ်သနည်း ထိုသို့လက္ခဏာသက်သေဖြစ် "ဘုရားသခင့်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်လက်နေတုန်းပဲလူတွေအပေါ်အနားယူ။ "
ဘုရားသခငျသညျ "အဖြစ်ကြာမြင့်စွာရုပ်တုထွက်လှည့်အဖြစ်, အနာဂတ်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကနေမြောက်ပိုင်း Exposure လူတွေ။ " ဟုအဆိုပါနှမြောပါလိမ့်မယ် အခြေအနေကို "ဟုအဆိုပါအိမ်၌လူ့လက်ဖြင့်ဖိမိပြီးမပေးပါ။ " ဒါကြောင့်ရှည်လျားသည် ဤအတောငျကိုလူ့လက်ဖြင့်ဖကျြဆီးခံရလိမ့်မည်ဟုပြောထားသည်။
သို့သော် အဓမ္မတိုးပွားလာ ။ လူသားရဲ့မယုံနိုင်စရာပိုကြီးနှင့်ပိုကြီးလာပြီ။ အတူတောင်ကြီးတောင်ငယ် gudagestalten အရူးအမူး '' s ကို။ ဘုရားသခငျသညျ ၎င်းငျး၏မြောက်ပိုင်း Exposure ကလူကနေလက်ကိုကာကွယ်အဖြစ်ယူ ။
အဓမ္မတိုးနှင့်မယုံကြည်သောပိုကြီးနှင့်ပိုကြီးရရှိသွားတဲ့, ပြီးတော့သူကဖြစ်ပျက်: Gudagestalten နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရနှငျ့ဘုရားသခငျမြောက်ပိုင်း Exposure ကလူမှသူ၏ကာကွယ်လက်ကြာ!
အခက်အခဲတွေအရပ်ရှည်ရှည်လူတို့အဘို့ သာ. ကြီးမြတ်များမှာ
လူတွေအရပ်ရှည်ရှည်ဒီတော့ဝေးသောအရပ်မှနှမြောခဲ့ကြောင်းအဆိုပါအခက်အခဲတွေ, သူတို့အပေါ်သို့ရောက်ကြလိမ့်မည် ။ ခုနစ်ဆနှင့်ဒုတိယကမ္ဘာ့နိုင်ငံများနှင့်လူမျိုးကိုညှဉ်းဆဲသောဘေးထက်ခုနစ်ကြိမ်ပို ။ "
သငျသညျယရှေုကိုလက်ခံရရှိပြီလော သငျသညျကယျတငျခွငျးသို့ရောပါသလား? ဒါဟာသင်ယခုရရန်အဘို့အမြင့်မားတဲ့အချိန်ပါ!
ရင်းမြစ်: Kristin ရဲ့ပရောဖက်ပြုချက် | Kristineberg အတွက်မြေအောက်ဘုရားကျောင်း | visitvasterbotten.se | အဆိုပါ Kristineberg မြေအောက်ဘုရားကျောင်းThornégårdenမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် | ခေတ်ဟောင်း၏ Kriberg